XOG:- Shariif Xasan oo berri ku dhawaaqi doonno inuu musharax madaxweyne yahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shariif Xasan oo berri ku dhawaaqi doonno inuu musharax madaxweyne yahay
Ilo lagu kalsoonaan karo aynu ka heleyno xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan uu maalinta berri ah ku dhawaaqi doonno inuu yahay musharax u tartamaaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo haatan ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegay inuu go’aan ku gaaray inuu ka qeyb-qaato tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo dhici doonta bisha soo socota ee November.
Inkastoo aan la ogeyn sida uu isku waafajin doonno xilka uu haatan haayo iyo musharaxnimadiisa madaxweyne ayaa hadane warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso sheegeyso in qorshaha Shariif Xasan uu yahay mid uu ku damacsan yahay in beesha Digil iyo Mirifle ay markaan helaan mid ka mid ah xilalka madaxweynaha ama ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sida muuqato arrintaan ayaa ciriiri aad u weyn gelin karta rajada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qabay in laga soo doorto deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, iyadoona arrinta kale ee rajada gelisay Shariif Xasan ay tahay in magaalada Baydhaba ay haatan tahay meesha ugu badan ee lagu dooranayo xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dhinaca kale, kulan ay dhawaan magaalada Baydhabo ku yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Xasan ayaa la sheegayaa inuu fashil kusoo dhamaaday, kadib markii ay labada dhinac isku af-garan waayeen shuruudo uu midba midka kale watay.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta berri ayaa la filayaa in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu si rasmi ah ugu dhawaaqo musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana sidoo kale xusid mudan in xilalka madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ay sida caadada ah hore ugu tartami jireen beelaha Hawiye iyo Daarood oo kaliya.